Zviitiko zvitatu zveItaly Zviitiko zveBurster Tourism neNew Confident Boost
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Zviitiko zvitatu zveItaly Zviitiko zveBurster Tourism neNew Confident Boost
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
TTG, SIA uye SUN 2021 vanosvika pakubudirira padyo
Pamhedzisiro inobudirira yeTTG, SIA, uye SUN 2021, iri tariro yeItari Gurukota rezveKushanya, Massimo Garavaglia kuti chinangwa chekukura kwekushanya kwe20% yeGDP chinhu chinowanikwa.
NKM, SIA neSUN 2021 vakasvika pedyo neRimini Expo Center (Italy) nevashanyi vanyoresa 90% yenhamba yakanyorwa. pamagazini ye2019. Yakarongedzwa neItaly Exhibition Boka, zviitiko zvitatu, izvo zvinounganidza pamwe zvekushambadzira zvekutengesa, zvakaona shanduko chaiyo mukutenderera kwevashandisi: dingindira rakakosha rakavhurwa iro gore rino. YekuItaly neyekunze kushanya saka inotangazve kubva pano.
Musika weItaly wekushanya wakarongedzwa neItaly Exhibition Group yakabata pamatanho epamberi pekupararira.
Mabhiza chiuru nemazana masere, zvivimbiso, uye zvinyorwa zvitsva zvinobva kune dzakawanda nyika dzekunze nematunhu eItaly zvaivepo.
Zviitiko zvinopfuura mazana maviri muzvikamu zvitanhatu zvemitambo yemaawa mazana matanhatu nemakumi mashanu ekukurukurirana neruzivo zvaive zvakanangana nevemaindasitiri nyanzvi.
Kutanga patsva kwakaona vatengi mazana manomwe kubva kunyika dzinopfuura makumi mana dzekune dzimwe nyika (vazhinji vacho varipo pakuonekwa pamwe nekufananidzwa kweavo vanobva kunyika dzaizoda kufamba nendege refu), 700% kubva kuEurope uye 40% kubva kune dzisiri nyika dzeEurope. 62% yevanoshanda vakasarudzika enzanirana nehunyanzvi mukushanya kwekuzorora (kubva kuboka rekufamba kuenda kumagadzirirwo akagadzirwa) nekumwe kugovera muchikamu cheMICE (Misangano, Incentives, Misangano uye Exhibitions). Kuparadzira pamusoro pemahoro gumi neshanu, mabhuru chiuru nemazana masere aivapo uye zviitiko zvinopfuura mazana maviri zvakarongedzwa nevanhu vanopfuura mazana maviri nemakumi maviri nematanhatu mutauri mu "Arenas" mapfumbamwe kwemaawa mazana matanhatu nemakumi mashanu ekukurukurirana neruzivo.
Mhedzisiro iyo yakanyanyisa kupfuura zvaitarisirwa ikauya padanho rehutachiona, ichiwana kurumbidzwa kwakakura kubva kune vese vane chekuita varipo uye vakabatanidzwa mukuumba meseji yehushingi uye hunyanzvi hwechikamu chakanyanya kubatwa pasirese nekutyisidzirwa nedenda. Nyika makumi matatu dzekunze dzinopinda TTG, dzimwe dzacho Italy yakavhura makoridho ehutano, yakapa chiratidzo chekuvimba kuti musika wekushanya wakarongeka wanga wakamirira. Nzvimbo dzinopisa, Middle East, America uye gungwa reMediterranean, pamwe neEurope, vakafema hupenyu hutsva mukuenderana nemapakeji matsva epasi rese evashanyi.
Pamwe chete nemasangano anomiririra emabhizimusi, kubva kuFederalberghi kuenda kumatunhu anomiririrwa neConfturismo, ASTOI (Tour Operator Association), FTO (Organised Tourism Federation), kusanganisira FAITA Federcamping, SIB (Seaside Establishment Union), mubatanidzwa wesangano ENIT (Italian Tourism Board) , maRegion, nyika yekutsvaga neISNART, Milan Polytechnic uye CNR (National Research Council) uye vanoongorora misika nevatengi, karenda yemisangano yakaverengerwa kuzomiririra kushanya mune ramangwana.
Rudzi rwekushanya urwo ruchakurukura nemasangano kuti akurumidze kuzvishongedza nematurusi anodiwa kutanga nyowani: kubva pane zvirevo zvakasimudzirwa kusimudzira chikamu chekugamuchira vaenzi maererano nehurongwa uye pfungwa kuitira kuzadzikisa kudikanwa kuri kuwedzera kwehunhu, kune matsva maindasitiri maitirwo, sezvakaitika kuITA (Italian Air Transport), iyo yakasimbisa kuzvipira kwayo mukuchengetedza nharaunda uye nehupfumi kuburikidza nekushanda nendege dzichangoburwa uye kusangana nekudiwa kwendege dzakananga munzira dzepakati penyika.
TTG yakaratidza zvakare kuti matunhu anokwanisa kuwedzera hunyanzvi nekuteerera kudana kwavo uye nekuvandudza yavo isingabatike midziyo yechinyakare uye zvigadzirwa zvakasarudzika, kubva kune ruzivo rwekushanya kune nzira dzewaini. Maitiro emusika anoda kuzivikanwa pamberi nekuona zviri kure kuitira kuti imutsiridze mukana wekukwikwidza wekuitaly pamisika yepasirese. Izvo zvakakosha zve58th TTG yakataura mutauro wekuvimba nevanhu, hupenyu, zvisikwa uye ramangwana. Panguva yemhemberero yekuvhura, Gurukota rezvekushanya, Massimo Garavaglia akataura tariro yekuti kukosha kwekushanya kuchakura ne20% yeGDP nekutenda kwakabatana kwechiratidzo cheItaly uye matanho akatorwa neHurumende mukufarira mabhizinesi nebasa.
Kucherekedza makumi manomwe emakore eSIA Kugamuchira Vaeni Dhizaini, maonesheni mana - Makamuri, Kunze, Wellness uye Hotera muMotion - yakarongedzwa nevakagadziri vane hunyanzvi mukugamuchira vaeni uye dhizaini dhizaini, yakaratidza hunyanzvi uye shanduko muMade muItari mahotera pakati pehusina hunyanzvi, kuenderera uye kutarisisa kukuru kune hutano hwepanyama uye hwepfungwa hwevaenzi, nekuwedzera kutarisisa pachiyero pakati penzvimbo dzakavharwa uye dzakavhurika.
SUN Beach & Outdoor Style, pane yayo makumi matatu neshanu edition, zvakare yaive nechirongwa chakazara nemafungiro matsva emabhizinesi ekunze, nzvimbo dzekugezesa uye makambi. Pfungwa nyowani dzekubatanidza dzakabatanidza kudiwa kwekugadzirwa, kutarisa kune zvakadzama uye mweya wakavhurika wemusika unokwanisa kwazvo weItaly nekune dzimwe nyika, kusanganisira nyika dzinotonhora dzekuchamhembe kweEurope. Uye ZUVA rakapawo maturusi emakambani kuita hunyanzvi muchikamu chino, nemakakatanwa akanangwa muchirongwa chekunze kweArena uye yakanangana nematanho akasiyana muBear Arena pane matekinoroji edigital matsva ayo mabhizi ave kuda kupa masevhisi matsva kune vatengi muzita yekuzorora uye kuchengetedzeka.
Uyezve, gore rino dzimba dzeSIA dzakaratidzawo chiitiko chitsva cheSuperfaces, b2b musika wakanangana nezvinhu zvekuvandudza zvemukati, dhizaini uye dhizaini.
IEG inotarisira kusangana neiri yose indasitiri yekushanya neyekunze zvakare kuRimini Expo Center kubva muna Gumiguru 12-14, 2022.
Hawaii Inozivisa Mitemo Mitsva yeInternational...
Vafambisi vekufambisa vane tarisiro yekudzoreredza kwekufamba mu...
Pemberera Mazororo Anofara kuThe St. Regis San Francisco